UMnyango ube nesandla ekuhlengeni isibhakela eKZN - Bayede News
Lokhu kunika ithemba lokuthi ezamankomane sezizobuyelwa yisithunzi ebezaziwa ngaso phambilini kanjalo kubuye nabalandeli
Kumele ushayelwe ihlombe uMnyango Wezemidlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal oholwa uMphathiswa uHlengiwe Mavimbela okubonakala uzihlenga ezamankomane njengoba bezibukeka zicwila nje.
Kusukela ngonyaka wezi-2010 izinga lezimpi kwezamankomane lehla kakhulu. Ngoba kwama lapho ukuthi zisakazwe kulandela ukuthi abakwaSouth African Broadcasting Corporation (SABC) bethe bayakumisa ukusakaza lo mdlalo kwazise iNingizimu Afrika yayisingethe iNdebe YoMhlaba kanobhutshuzwayo.
Ngonyaka odlule izinhlaka zezamankomane okukhona kuzo abashayisibhakela, abaqeqeshi, onompempe, ophromotha, yizimeneja nabanye bahlela imashi yokuthi kuyiwe emahhovisi akwaSABC bekhala ngokuthi kusukela ngonyaka wezi-2010 izimpi azisasakazwa ngendlela.
Yize namanje zingakasakazwa kodwa uMnyango Wezemidlalo kulesi sifundazwe uyibuyisile inhlansi yethemba njengoba uxhasa izimpi phezu kokuba nokhuvethe lufike lwahlikihla usawoti esilondeni.
Ukufika kokhuvethe kwaba nomthelela omkhulu kulo mdlalo, kungewona kuphela kodwa yonke indawo.
Nonyaka uMnyango ukwazile ukuthi ufake isandla kophromotha abaningi ukuthi bakwazi ukuqhatha izimpi zabo.
Izimpi esezibe khona kulo nyaka sezingaphezulu kwezine, zixhaswa yiwo lo Mnyango.
Izimpi ezaqala ngezikamufi uThulani “Sir” Magudulela weLudonga Promotion.
Konke ayekuhlelile kwasekumi ngomumo, izimpi zakhe zazizoba ngomhla zili-14 kuNhlolanja. Kwathi sekusele izinsuku ezintathu ukhuvethe lwase lumhlanganisa namathonga akubo.
Ngesikhathi ekhuluma nelaboHlanga wakusho kwagcwala umlomo ukuthi ubonga uMnyango Wezemidlalo ngokuthi ukhokhele izindleko eziningi okubalwa nokuhlolelwa kosomankomane ukhuvethe. Okubuhlungu nje ukuthi wagcina engabange esawubona lo mqhudelwano nawo owagcina ubhuntshile.
Kwalandela izimpi zikaZandile Malinga weStarline Boxing Promotions zona ezaba mhla zingama-27 kuNhlolanja, ezaba impumelelo ngenxa yawo uMnyango.
Emasontweni amabili edlule bekunezimpi zikaNomvelo Magcaba-Shezi weMvelo Boxing Promotions eCity Hall eMgungundlovu nazo ezibe impumelelo. U-Andile “Holy Ghost” Mntungwa kulo mqhudelwano unqobe ibhande leWBF All Africa Middleweight ebelingaphethwe umuntu alinqobe ebhekene noLee Dyer waseGoli.
NgoMgqibelo bekunezimpi ebezihlelwe iSyathaba Boxing Promotions ebezibanjelwe e-Ugu Leisure Centre ePort Shepstone, kuthe ngeSonto kwaba nezimpi eShowe ebezihlelwe iTap Tap Academy obekuhlonishwa kuzona usomankomane u-Elijiah “Tap Tap” Makhathini.
NgoMgqibelo uMnyango unikele kubaqeqeshi besibhakela abali-10 ngezinsiza zokuziqeqesha. Kuzuze abaqeqeshi basezindaweni zasemakhaya phakathi kwabo kubalwa uXolani Hlatshwayo waseMnambithi noSibusiso Phakathi oqeqesha eZululand.
Lokhu kunikezwa kwezinsiza bekuhanjelwe nangusomankomane wakudala uThulani “Sugar Boy” Malinga. Konke lokhu okwenziwa yilo Mnyango kubuyisa inhlansi yethemba lokuthi izinga lalo mdlalo kulesi sifundazwe lizobuyela kuleli lakudala.
Okunye okuhle okwenziwe uMphathiswa uMavimbela, ukunikeza indodana kaMagudulela uMalethi izimpahla zokuqeqesha, wabe eseqinisa lo mndeni idolo. Ubalule nokuthi bazimisele ngokwenza umcimbi ozoba kwaNongoma ukuhlonipha uMagudulela kwazise wazalelwa khona.
Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinabo abantu abahlonishwayo kulo mdlalo okubalwa uMalinga, uMakhathini, uWiseman “Sabalutho” Dhlomo owanqoba ibhande leHeavyweight lapha eNingizimu Afrika, uChristopher Buthelezi owanqoba iMiddleweight kuleli, uSboniso Gonya owanqoba ibhande le-IBF.
Abanye yize sebehlala eGoli kodwa okwenza bebelapho abakhona kulo mdlalo yisona isifundazwe iKwaZulu-Natal. Labo nguMoruti “Babyface” Mthalane oseke waba ngumpetha we-IBF noThabiso “The Rock” Mchunu.
UMchunu ngeledlule uthole ithuba lokuthi alwele ibhande leWorld Boxing Council (WBC) emveni kokuthi eguqise u-Evgeny Tishcheko waseRussia. Uzobe esebhekana no-Ilunga “Junior” Makabu. Siyambongela kakhulu uMchunu ngokuthi aphakamise ifulegi lakuleli eRussia.